N'ihu: Nweta Onyinye Ekekọrịta Banyere Nkwukọrịta Ahịa Gị | Martech Zone
Ihu bụ usoro nkwukọrịta ndị ahịa na-ejikọ ozi ịntanetị, ngwa ọdịnala, na ndị otu egwuregwu n'otu anya. Na Front, ọ dị mfe maka mmadụ niile nọ n'ụlọ ọrụ gị inwe mmetụta na ahụmịhe ndị ahịa.
N'ihu na-enwe mmasị iche banyere onwe ya dị ka ebe nkwukọrịta maka ìgwè ndị na-ere ahịa. N'iji usoro mgbasa ozi gị niile na-ahụ otu gị n'otu windo n'akụkụ sistemụ CRM na usoro azụ gị, ihu na-enyere gị aka ịmechi karịa, ngwa ngwa, na-enyere ndị ahịa gị aka:
Wụpụta arụmọrụ na-akpaghị aka jiri akara ngosi nwere ọgụgụ isi iji dozie ụzọ ndị na-abata, na-eduga ha na onye ziri ezi, ma na-ebute ụzọ.
Rụkọta ọrụ na nkwukọrịta na ozugbo na templatize gị kasị dị irè ozi. Mee ngwa ngwa na atụmatụ na ọnọdụ zuru oke.
Kpesa banyere ọrụ ire na oge nzaghachi iji nweta nghọta ị chọrọ iji meziwanye. Nye ndị nwe ụlọ ọrụ ka ha lezie atụmanya ọ bụla anya site na njedebe ruo na njedebe.
iwekota Ahịa (ma ọ bụ CRM ọ bụla) n'ime igbe mbata gị maka ọnọdụ zuru oke na mkpịsị aka gị. Tinye mmekorita omenala site na API mepere emepe nke Front.
N'ihu Key Atụmatụ
Igbe Ozi Otu - N'ihu na-enye gị ohere idozi igbe igbe otu egwuregwu gị site na ọwa, ọkwa, ọdịdị ala, ịdị mkpa - agbanyeghị, ị na-ahazi atụmanya gị, Ihu nwere ike ime ya.
Ibọrọ mkpọ - Nọgidere Na-etinye ụkwụ gị kachasị mma n'ihu na ndebiri email echekwara echekwa kachasị maka nzaghachi nzaghachi dị elu.
Ikekọrịta drafts - Draft ma dezie ozi ịntanetị ọnụ na ezigbo oge iji mezuo mgbasa ozi gị ma zere ịmegharị azụ na-apụta na drafts.
Na-ekwu - Gị na ndị otu gị kparịta ụka ọsọ ọsọ na email nke olile anya ọ bụla iji kwado usoro gị tupu ị ruo.
Kpoo - Nọrọ na-elekwasị anya na azụmaahịa gị kachasị dị elu ma ghara ịhapụ bọl na ntinye.
CRM Nweta - Nweta gị CRM nri na-esote ozi ọ bụla.
Rịọ n'ihu ngosi
Tags: nchịkọta emailọrụ emailemail kwurufrontappnnabata emailnnabata akaụntụ emailnnabata inbox